IMIPHEZULU YEETAFILE ZEGREEN GRANITE (IMIBALA KUNYE NEZITAYILE) - UKULUNGISWA NGAPHAKATHI
Eyona ukulungiswa Ngaphakathi Imiphezulu yeetafile zeGreen Granite (Imibala kunye neZitayile)
Imiphezulu yeetafile zeGreen Granite (Imibala kunye neZitayile)
Wamkelekile kwigalari yethu yoyilo yemiphezulu yeetafile zegranite eziluhlaza.Ukuhonjiswa ngobuhle kunye nokuqina okuzinzileyo okunokuhlala ubomi bakho bonke, igranite eluhlaza lukhetho oluhle kakhulu lokubala imiphezulu yeekhitshi ezitofotofo. Njengalo naluphi na olunye uhlobo lwenyengane, imiphezulu yeetafile zegranite eluhlaza zizizilumko kwaye zisebenza kakuhle kulo naliphi na ikhaya, kungekuphela ngenxa yomelele kodwa nangenxa yokuba kulula kakhulu ukuzigcina. Apha ngezantsi uzakufumana imiphezulu yeetafile zegranite eluhlaza, ezona ntlobo zazo zidumileyo kunye nesikhokelo esibanzi sokulinganisa ukuhambelana nekhabhathi ekhitshini lakho.
Nangona kungenjalo ukhetho oluphezulu njenge imiphezulu yeetafile zegranite emhlophe kwaye ingathandwa njengegranite emnyama, igranite eluhlaza yenye yezona zinto zinobunkunkqele ekunokukhethwa kuzo. Ukurhabaxa komlilo kunye nobukhulu, imiphezulu yeetafile zegranite eluhlaza isebenza njengesitatimende esibonisa isibindi nakweyiphi na ikhitshi. Yindawo ekhethekileyo ekugxilwe kuyo kunye neliso eliya kuthi ngokuqinisekileyo lenze ikhaya lakho linomdla. Eli phepha liyinxalenye yethu imiphezulu yeetafile lenyengane Isikhokelo sokugqibela (Qiniseka ukuba undwendwela ezinye iindlela kunye nemibala)
Igranite eluhlaza ifumaneka kwimibala eyahlukeneyo ukusuka kobuqhetseba ukuya kwii-shades ezomeleleyo. Phakathi kwayo yonke imibala yegranite, inika okwahluka kakhulu kwimibala yesibini eyenza ukuba ibe bhetyebhetye xa kufikwa kuyilo kunye nokuthelekisa. Iza ngohlobo olwahlukileyo lokukhanya ukuya kumbala omnyama oluhlaza, igolide, ubhedu okanye umnyama, kunye nezandi eziphantsi ezisuka kumhlophe, beige nakwingwevu, kunye nokuqaqamba kwegolide etyheli, ebomvu garnet kunye ne-aqua eluhlaza okwesibhakabhaka.
Kuthathelwa ingqalelo ukuba yeyona granite ijongeke kakhulu, igranite eluhlaza ikwafumaneka kuluhlu olubanzi lweepateni. Iza ngemibala eqinileyo kunye nokwahluka okuncinci kwamachaphaza angwevu angacacanga okanye nokuba yirhabaxa, enamatye amdaka, egreyithiweyo okanye ebalekileyo. Olu hlobo lwepateni lolona lujongeka kakhulu.
Uhlobo lwesibini lwepateni luhlobo lwe-marbled okanye ye-veined ebonakaliswa kukutshintsha kwemibala kunye nokuhombisa. Olu lolona hlobo lunomdla kakhulu lenyengane eluhlaza njengoko indibaniselwano yemibala yahlukile kakhulu kwaye ayinakuthelekiswa neminye imibala yegranite. Ngokuhamba okuphezulu kunye ne-dynamics etyebileyo, i-marbled green granite yeyona nto inqabileyo ngokwembonakalo.
Uhlobo lokugqibela lwepateni luhlobo olunamachokoza olunokwahluka okuphezulu phakathi kombala kunye nokuthungwa. I-granite eluhlaza eluhlaza ene-accents yeekristali ezinqabileyo kunye neeminerali ezinemibala yensimbi enjenge-mica, i-quartz kunye ne-feldspar.
Igranite eluhlaza ikwayitafile efanelekileyo kuzo zombini iikhitshi ezingaqhelekanga nezisesikweni, kuxhomekeke kumthunzi wombala wazo. Kodwa ngesiqhelo, isetyenziselwa uyilo lwesiko olungaphezulu. Yongezwa ngokumangalisayo kwizitayile ezifuna imibala efumileyo enzulu enje ngeMedieval, iRustic, iMoroccan, ilizwe kunye neLizwe lesiNgesi eliphefumlelweyo. Ukufumaneka kwayo kwiipateni ezinesibindi ezinzima kwenza ukuba kufaneleke kakhulu kuseto lweVictorian kunye neTuscan.
Ngokuchasene nenkolelo edumileyo, imiphezulu yeetafile eluhlaza ayisiyongxaki xa kuziwa ekuhombiseni. Kuba uluhlaza ikwangumbala opholileyo kunye nozolisayo, imiphezulu yeetafile zegranite eluhlaza zithande ukwenza amakhaya ameme ngakumbi kwaye akhuthaze. Umbala wendalo, yiyo loo nto inika iikhitshi umoya opholileyo kunye nembonakalo yendalo. Iigreyiti zomhlaba ezinombala omdaka ongwevu nengwevu kwigranite eluhlaza zisikhumbuza ngemibala esiyibonayo kwizityalo kunye namagqabi anika ngaphakathi ekhitshini uyilo lwe-organic kunye nomoya opholileyo.
Ukutshatisa imiphezulu yeetafile Granite Green kunye nekhabhathi
Ixabiso leGreen Granite
Iindidi zeGreen Granite
Ithayile yeGreen Granite
Ngaphandle kokuqwalaselwa njengenye yeetafile eziphambili kakhulu, ubuhle begranite eluhlaza kukuba idibanisa kakuhle nayiphi na umbala wekhabhinethi. Ukufumaneka kwayo kwiipateni ezahlukeneyo kunye nemibala kuyenza ibe bhetyebhetye xa kufikwa kuyilo kunye nokuthelekisa.
Nasi isikhokelo esilula sokulandela onokuthi usilandele xa ukhetha ukusebenzisa igranite eluhlaza njengendawo yokubeka ikhitshi ekhitshini lakho.
Ukukhetha ukuba loluphi uhlobo lwegranite eluhlaza oza kuyisebenzisa:
Uhlobo loyilo . Imiphezulu yeetafile zegranite eluhlaza zisebenza ngeendlela ezahlukeneyo zoyilo ekhitshini. Into yokuqala ekufuneka uyiqwalasele ekuthatheni isigqibo sokuba yeyiphi igranite eluhlaza oza kuyisebenzisa kwi-countertop yakho yasekhitshini kukumisela ukuba yeyiphi na ingqikelelo ofuna ukuhamba nayo. Oku kuya kukunceda uqokelele umbala wombala opheleleyo kwaye ukhethe izinto ezihambelanayo zokugqiba iikhabhathi zakho kunye nomgangatho. Umhlaba omdala okanye isimbo sendabuko, umzekelo, kufuna iskimu sombala esityebileyo nesigqibeleleyo, ngenxa yoko unokukhetha igranite eluhlaza enzulu umbala okanye iphethini yedrama, enje nge-Emerald Green Granite, Peacock Green Granite okanye Seaweed Green Granite.
Ikhitshi langoku, kwelinye icala, lihlala linombala oqaqambileyo okanye ongqindilili, ke khetha ukuhamba nento enombala odlamkileyo ofana neSilver Sea Granite okanye iSeafoam Green Granite. Ikhitshi eliphefumlelweyo laseAsia liya kufuna izinto zaseMpuma okanye ezetropiki, ke ngoku gqibezela ukujonga usebenzisa iVerde Bamboo granite. Iikhitshi zesitayile sanamhlanje zihlala zinenkangeleko elula ngakumbi ngenxa yoko khetha igranite eluhlaza ecekeceke okanye enemibala eqaqambileyo, ayi-oveAmandla kunye nokungahambelani kangako.
Ukutshatisa kunye neengcamango:
yintoni onokuyifumana intombi kwisikhumbuzo
Umbala weKhabhinethi. Imiphezulu yeetafile zegranite eziluhlaza zinokuhamba kakuhle ngemibala emininzi yekhabhinethi yasekhitshini ukusuka kwimibala emhlophe ukuya ekukhanyeni, amabala aphakathi kunye namnyama. Ikhabhathi emhlophe ehambelana nemiphezulu yeetafile zegranite eziluhlaza kunye nokunciphisa ukubukeka kwekhitshi nokuba ingaba yeyesiko okanye yangoku. Igranite eluhlaza ikwagcwalisa imibala eyahlukeneyo enamabala amdaka kunye nawomthi okoko iithoni zayo zomhlaba ezinxibelelene kakuhle nembonakalo yemithi. Sebenzisa oku ukuba ukhetha umhlaba ongaphezulu, ophilayo kunye nendalo ephefumlelweyo yoyilo. Nangona kunjalo, olona khetho lufanelekileyo kukuhamba ngobunzulu, izityebi, ubumnyama bendalo obumdaka njengeCherry okanye iMahogany. Gwema imibala ebomvu okanye emnyama kwiikhabhathi zakho. Xa izixhobo zekhabhathi zigqityiwe, yiya ngokugqitywa okuqaqambileyo okanye kwesatin okanye izinto zobhedu.
Imibala Yodonga.Iphalethi yodonga engathathi hlangothi ihlala isebenza ngokukuko kwiitafile zegranite eziluhlaza. Imiphezulu yeetafile zegranite eluhlaza kunye neepateni ezinesibindi nezixakekileyo kufuneka zihlale zidityaniswe ngombala ocekeceke ngakumbi kunye nombala othulisiweyo. Yiya ngeendonga ze-beige okanye ukhilimu, okanye ukuba ufuna ukongeza inkangeleko ephefumlelweyo yendalo ekhitshini lakho, penda iindonga ngombala omdaka, itan okanye isanti. Iskimu sombala we-monochromatic lolunye ukhetho olunokuphononongwa. Pair etyebileyo etyebileyo ngombala oluhlaza kunye nomthunzi othulisiweyo ngakumbi kwiindonga ezinje ngesilumko, ukukhanya moss okuluhlaza okanye ukukhanya ukukhanya kweminti eluhlaza.
Umgangatho . Ukusukela ukuba imiphezulu yeetafile zegranite eluhlaza sele zikhangeleka ngokumangalisayo, kungcono ukusebenzisa izinto zokuhombisa ezinemibala kunye noyilo olucacileyo. Ukuba usebenzisa iiplanga zomthi, khetha ibala elikhanyayo njengemephu okanye i-birch elula. Kwiithayile, kungcono ukuyibhangqa ngombala okhanyayo we-matte yodongwe okanye iithayile zendalo. Ezi ziya kuncedisa imiphezulu yeetafile zakho zegranite eluhlaza ngokugqibeleleyo ngaphandle kokukhuphisana nokuqwalaselwa. Gwema ukusebenzisa iileyili zeceramic.
Ukubuyela umva.Isenokungabi yinto efanelekileyo ukudibanisa imiphezulu yeetafile zegranite eluhlaza kunye neethayile zemibala emibalabala, ngaphandle kokuba inyengane inombala ofihlakeleyo kunye nephethini elula efana neSurf Green Granite. Ukugcwalisa imibala yethayile kaMoses kusenokusetyenziswa ukuba ufuna ukongeza uphawu ngakumbi kwisithuba sakho. Okanye ukuba akunjalo, khetha ukuhamba kunye neethayile ezilula ze-beige okanye ilitye lendalo elinombala odityanisiweyo njengesileyiti okanye ilitye lekalika. Imibala emnyama ebuyela umva ehambelana nemiphezulu yeetafile zegranite eluhlaza ivusa ubushushu kwaye ikwajongeka njengokujonga. Hlala uhlala ukhumbula ukuba igranite eluhlaza ikhupha ubuhle kwaye kungcono ukuba uyivumela ukuba ibonakale emajukujukwini.
Okunye okuninzi iingcebiso eziphambili zoyilo ukukhumbula xa usebenzisa imiphezulu yeetafile zegranite eluhlaza ekhitshini lakho:
Gwema iipateni ezixakekileyo okanye ezimibalabala kunye nokugqitywa okunokukhuphisana nesitayile sakho esiluhlaza. I-granite eluhlaza yindawo ekugxilwe kuyo ngokwayo ukuze uqiniseke ukuba ubukho bayo nakweyiphi na ikhitshi aboyiswa zezinye izinto zoyilo. Ukudibanisa iipateni ezininzi kakhulu kuya kuthatha ingqalelo kude kubuhle bendalo betafile yakho yegranite.
Ungathathi hlangothi imiphezulu yeetafile zegranite eluhlaza ngokongeza umbala okhanyayo kwiphalethi yakho, nokuba yeyodonga, umgangatho, isilingi, ukubuyela umva okanye izixhobo.
Tshatisa iphalethi yakho ngononophelo ngokusebenzisa imibala yestriking, imithambo okanye imiphunga efumaneka kumphezulu wegranite eluhlaza. Oku kuya kuthi okungenani kunike umbono wemibala yesibini onokuyongeza kwiphalethi yoyilo lwakho lwekhitshi.
Khumbula ukuba umbala wombala owusebenzisayo xa usenza nasiphi na isithuba uvelisa iimvakalelo ezahlukeneyo okanye ii-ambiances. I-granite eluhlaza yaziwa ngokongeza umdlalo weqonga kunye nobunkunkqele- umbala omnyama ngombala wegranite eluhlaza, kokukhona ubonakala umhle ngakumbi.
Ngokubanzi, inyengane eluhlaza ibiza kakhulu kunabalingani bayo abamhlophe nabamnyama kuba uninzi lwegranite eluhlaza ithathwa njengonqabileyo kwaye inembonakalo engaqhelekanga. Iizilebhu zendalo ezivela ngqo emigodini zibiza kakhulu kwaye zixabiso lazo malunga ne- $ 35 ukuya kwi-70 yeedola ngeenyawo ezikwere zeemitha ezintathu.
Okumangalisa ngakumbi kunye nokuyila kuyilo, kuyabiza kakhulu. Igranite eluhlaza enqabileyo enje ngeSilivere yoLwandle Granite, i-Emerald Green Granite kunye nePeacock Green Green Granite iwela kwizibiyeli eziphezulu zokuphamba, zihlala zibiza malunga ne- $ 50 ukuya kwi-70 yeenyawo ngonyawo wesikwere kwinto leyo kuphela. Nangona kunjalo, olu qikelelo lungahluka ngokuxhomekeka kwindawo okuyo.
Iindleko zabasebenzi kunye nokufakelwa kwegranite eluhlaza kuyafana nakwezinye iintlobo zegranite. Iphantse yabiza kabini isixa semathiriyeli kwaye ihlala ithatha malunga ne-70% yexabiso leprojekthi lilonke. Ngaphandle kwezi zinto, jonga kwakhona ukuhlelwa okusetyenziswayo.
Awusoze uhambe gwenxa ngecwecwe lokubala legranite eliluhlaza elidityaniswe neekhabhathi ezimnyama zeCherry, umgangatho ongathathi hlangothi kunye neendonga ezikhanyayo. Le khitshi ephefumlelweyo yendabuko isebenzisa i-countertop ye-granite eluhlaza njengendawo elula elula.
Igranite eluhlaza ifumaneka ngemibala eyahlukeneyo kunye neepateni. Apha ngezantsi kukho uluhlu lweentlobo ezaziwa kakhulu zegranite eluhlaza esetyenziselwa imiphezulu yeetafile yekhitshi.
Inkanyamba Green Granite
Iimpawu: I-Typhoon I-granite eluhlaza ithathwa njengenye yeentlobo ezinqabileyo zegranite. Ebonakaliswa yimvelaphi yeetoni eziphakathi yayiquka okuluhlaza, okungwevu, isiseko selitye elinegolide kunye namdaka omdaka kunye nemingxunya ye-burgundy. Ukubonakala kwayo ngokubanzi kujongeka njengokuluhlaza okuluhlaza komnquma kunye neethoni emdaka. Olu hlobo lwegranite ngumdlalo ogqibeleleyo wekhabhathi zekhitshi zomthi.
Ilizwe lemveli: Indiya
Amahlathi emvula Green Granite
Iimpawu: Uhlobo olungaqhelekanga lwegranite, i-Rainforest Green Granite ubukhulu becala yenziwe ngamatye e-serpentinite ngokudibanisa i-moss eluhlaza kunye nemvelaphi yekrimu egxininiswe ngombala omdaka ohamba ngokungathi ngumthi wesebe lomthi. Ngenxa yokuhamba okuphezulu kwipateni yale granite, olu hlobo lwe-countertop kufuneka lubhangqwe nekhabhathi ekhanyayo ekhitshini. Ikhabhathi yekhitshi emhlophe ikwindawo efanelekileyo nanjengoko ingoyisi imbonakalo eyodwa yelitye elinobubele.
Ixabiso: $ 20 ukuya kwi-35 ngonyawo wesikwere (3cm ubukhulu)
Iplanethi yemvula eluhlaza emvula enamanzi emvula xa idityaniswe neRed Mahogany ibala lekhabhathi kunye namaplanga afanayo eplanga enza imvakalelo efudumeleyo kwaye imema nakweyiphi na ikhitshi. Ukongezwa kwe-backsplash yombala othululweyo kugcwalisa imibala ye-countertop ngaphandle kokuyomelela.
Ulwandle lweGreen Granite
Iimpawu: Ngobukeka obahlukileyo obufana nokubonakala kwamagwebu aselunxwemeni, luphawulwa ngokudityaniswa okuluhlaza kunye nemvelaphi engwevu eqaqanjiswe ngamakristali amhlophe, amaminerali ngamanye amaxesha amnyama kunye nethoni etyheli. Kuthathelwa ingqalelo njengohlobo lwamatye exotic kwaye lunqabile, i-Seafoam green granite ibiza kakhulu kunezinye iintlobo zegranite kuba kunzima ukuyifumana nokuyivelisa. Ukwenza le countertop ibe yindawo enomdla ekhitshini lakho, kungcono ukuyidibanisa neekhabhathi ezimhlophe okanye iikhabhathi ezinemibala ekhanyayo.
Ixabiso: $ 50 ngonyawo wesikwere (3cm ubukhulu)
Ilizwe lemveli: Brazil
Itropiki yeGreen Granite
Iimpawu: Ngomzekelo we-veiny onomdla, olu hlobo lwegranite ubukhulu becala luhlaza ngombala ngombala omhlophe, ohlaza okwesibhakabhaka kunye namaza amnyama angwevu kuyo yonke. Ikwabizwa ngokuba yiKerala Green Granite, iVerde Kerala Granite, iVerde Tropical Granite. Kuba le granite inembonakalo exakekileyo, ilunge kakhulu njengendawo yokubeka iikhabhathi emhlophe ekhitshini.
Ibhabhathane eliluhlaza iGranite
Iimpawu: A. I-lso eyaziwa njenge-Verde Butterfly Granite, olu hlobo lwegranite eluhlaza luhlaza kakhulu ngombala kunye nemixube emhlophe, emnyama kunye nemithambo entle engwevu. Inepateni eguqukayo yokuguqula i-veining kwaye ngamanye amaxesha ine-accents etyheli kumphezulu wayo. Xa isetyenzisiwe kunye neekhabhathi zekhitshi ezinemibala ekhanyayo, olu hlobo lwesitriti segranite ngokuqinisekileyo luya kwenza umbala wemibala yakho iphume.
Ixabiso: $ 35 ngonyawo wesikwere (3cm ubukhulu)
Ipikoko yeGreen Granite
Iimpawu: Okubonakalisa imibala yeentsiba zepikoko, olu hlobo lwegranite eluhlaza lunomxube ongaqhelekanga wemifuno enzulu, iiblues zeridescent kunye negrays ezipholileyo eziqaqanjiswe ngemigca yegolide kunye namacebo emfusa okanye apinki. Inesiseko esimnyama kakhulu esibonakala phantse simnyama ngombala. Kuthathwa njengenye yeentlobo zegranite ezinamandla, iPeacock Green granite inesibheno esinomdla esenza ukuba ibe yindawo yokuthwala iiparitha zendalo. Ikwabizwa ngokuba yiVerde Peacock Granite, Peafowl Green Granite, Furong Green Granite,
Ixabiso: Iidola ezingama-35 ukuya kwezingama-40 ngonyawo wesikwere (2cm ubukhulu), i-40 ukuya kwi-50 yeedola ngonyawo (3cm ubukhulu)
$ 65 ngonyawo wesikwere (2cm ubukhulu) lokwahluka ngokukhanya
I-Emerald eluhlaza Granite
Iimpawu: Uhlobo lwegranite olunokwahluka okuncinci kwaye luphawulwe ngemvelaphi emnyama emnyama egxunyekwe ngamakristali aluhlaza oqaqambileyo, ukuqaqamba okuluhlaza okwesilivere kunye nesilivere enemigca emincinci emhlophe nengwevu. Amanye amagama oshishino ngamaTshayina Uba Tuba Granite, Labrador Escuro, Green Lundhs, Emerld Pearl Granite. Ukubonakala kwayo kusinyithi kuyenza ibe yindawo ekumelana nayo yokuphekela iikhitshi ezinekhabhathi emhlophe okanye ukukhanya nekhabhathi yendalo enamabala.
Ilizwe lemveli: Norowe
Iikhabhathi ze-oki zendalo, ukuthelekisa iplanga kunye ne-Emerald Green granite countertop kugqibezela ukubukeka okumangalisayo kweli lizwe liphefumlelwe ikhitshi. Izixhobo zensimbi ezingenasici kunye ne-diagonal elula yethayile yokubuyela umva kongezwe ngokungafaniyo kunye nokubonisa ukubonakala kwesi sithuba.
Ukujonga iGranite yeGreen
Iimpawu: I-Surf i-granite eluhlaza inesiseko esiluhlaza kakhulu esine-grey kunye ne-beige flecks. Umbala wayo uphela ujongeka ngathi ungwevu nto leyo eyenza ukuba ube yindawo efanelekileyo yokubaleka ngokwenza umahluko kwiikhitshi ezineekhabhathi ezimnyama.
I-Esmeralda Green Granite
Iimpawu: Eyaziwa nangokuthi yiCosta Esmeralda Granite, iCosta Smeralda Granite okanye iVerde Esmeralde Granite, olu hlobo lwegranite lunombala owahluke mpela ophawulwa yimithambo yegolide ebalaseleyo egudle imvelaphi eluhlaza eluhlaza enemithambo emhlophe, engwevu emnyama kunye nemithambo engaphantsi. Ezinye iilabs ze-Esmeralda Green Granite zinokuba mnyama kakhulu okanye zikhanye kakhulu. Njengetafile yekhitshi, ilunge ngakumbi ngokudityaniswa nekhabhathi emhlophe okanye emhlophe. Kuba le granite inkohliso ngakumbi ukuyifaka kuyilo lwekhitshi, khumbula ukugcina iphalethi yakho ingathathi hlangothi ukuvumela ubuhle bendalo bale granite bukhanye kwisithuba.
Ixabiso: $ 40 ngonyawo wesikwere (3cm ubukhulu), $ 30 ngonyawo wesikwere (2cm ubukhulu)
Ilizwe lemveli: ElamaTaliyane
I-Granite eluhlaza yaseHawaii
Iimpawu: I-Granite yaseHawaii eluhlaza inombala oluhlaza womnquma kunye negrey ephantsi egxininiswe ngepinki emnyama kunye ne-garnet flecks, imnyama emnyama kunye notyheli. Ikwabizwa ngokuba yiVerde Laura Granite, iVerde Jewel Granite eIndiya okanye iVerde Tropical Granite. Olu hlobo lwesitafile sekhitshi legranite ngokuqinisekileyo luya kongeza ubuchwephesha kwiikhitshi ezinekhabhathi yokhuni ephakathi ukuya kumbala omnyama.
Zaselwandle Green Granite
Iimpawu: Amanye amagama kolu shishino yiPocono Green Granite, iTitanic Green Granite okanye iPine Green Granite. I-Seaweed Green granite inombala oluhlaza otyebileyo kunye nemithambo yegolide, obomvu nomnyama omnyama kunye nexabiso eliphantsi le-beige. Olu hlobo lwetheyitile yegranite sisibini esifanelekileyo esimhlophe, esikhanyayo nesiphakathi esinemibala iikhabhathi zomthi, Ingasetyenziselwa kunye neekhabhathi ezimnyama ukuba ujonge ukubonakala okuthe kratya kwaye okumangalisayo kwikhitshi lakho.
Ixabiso: $ 46 ngonyawo wesikwere (3cm ubukhulu)
IGreen Green Granite
Iimpawu: IGreen granite eluhlaza inembonakalo eyahlukileyo efana neenkwenkwezi zokudubula ezisasazeka kwisibhakabhaka esimnyama. Iphawuleka ngemvelaphi emnyama enobunzulu obuhlukeneyo bemithambo eluhlaza kunye nengwevu eyenza ukubonakala kwayo ngokubanzi umbala ocacileyo oluhlaza. Ngamanye amaxesha ikwanamaxesha amnyama aluhlaza ebusweni bayo. Ikwabizwa ngokuba yiVerde Pantanal Granite okanye iGreen Pantanal Granite. Ukufumana ezinye izimvo jonga imifanekiso ye- imiphezulu yeetafile lenyengane emnyama Apha.
ISilivere yoLwandle iGreen Granite
Iimpawu: Xa ujonga ngokusondeleyo, olu hlobo lwegranite eluhlaza lufana nokukhanya kunye nohlobo olwahlukileyo lweGreenite yoLwandle oluLwandle. Ebonakaliswe yimbonakalo ebengezelwe kakhulu, inekhephu elimhlophe kunye nemvelaphi ye-beige eqaqanjiswe ngesilivere, tyheli namthubi. Ikwabizwa ngokuba yiGreen Ranyah Granite, Rania Green Granite, Ranyah Emerald Granite, Saudi Green Granite okanye eMpuma Green Granite. Isetyenziswe kakuhle njenge-countertop yamhlophe, ukukhanya, okuphakathi kunye nobumnyama iikhabhathi zekhitshi.
Ixabiso: $ 65- $ 70 ngonyawo wesikwere (3cm ubukhulu)
Ilizwe lemveli: Sawudi Arabhiya
Intaba yeGreen Granite
Iimpawu: Uhlobo lwegranite eluhlaza kunye nepateni yegranular, inemvelaphi eluhlaza yomnquma kunye nombala oluhlaza, mhlophe, ngwevu namnyama. I-countertop ye-granite eluhlaza ifanelana ngokufanelekileyo kunye neendawo eziphakathi ukuya kumnyama iikhabhinethi zekhitshi.
Iimpawu: I-Green Pearl Granite inendibaniselwano ye-emerald emnyama eluhlaza kunye nemvelaphi efudumeleyo engwevu egxunyekwe ngemithambo yegolide encinci kunye nokuhamba okumnyama nokumhlophe. Ikwabizwa ngokuba yiLabrador Verde Granite, Labrador Dunkel Graniteor Verde Larvik Granite. Yongeza ubutyebi kwinkangeleko yakho yekhitshi ngokudibanisa olu hlobo lweetheyitile kunye nekhabhathi emhlophe okanye emhlophe yeCherry.
Ixabiso: $ 3o to $ 40 ngonyawo wesikwere (3cm ubukhulu)
IVerde Bamboo Granite
Iimpawu: I-Verde Bamboo granite inemibala kunye neepateni ezifana ne-bamboo. Kuthathelwa ingqalelo njengohlobo olunqabileyo nolungaqhelekanga lwe-quartzite, inee-shades ezahlukileyo eziluhlaza, umbala okhanyayo ongasemva moss oluhlaza kunye nephethini eyomeleleyo ye-veining emnyama kunye nokuqaqamba okuluhlaza okuluhlaza. Xa isetyenzisiwe, yongeza imvakalelo yetropiki kumoya wendawo. Njengesixhobo sokubala, isebenza njengendawo ekugxilwe kuyo enomdla kwaye inegalelo lokwahluka kunye nobukhulu kuyilo lweekhikhini. Ikwabizwa ngokuba yi-Bamboo Green Granite, iVerde Bamboo Clasico Granite, iVerde Bambu Granite, iAmazon Green Granite.
Ixabiso: $ 55 ukuya kwii-65 zamaRandi ngonyawo wesikwere (3cm ubukhulu)
Ungathenga igranite eluhlaza ngexabiso eliphantsi ngokukhetha ukuhamba ngeethayile zenyengane. Iithayile zeGranite zisikiwe ngaphambili, zincinci kwaye zikhaphukhaphu ezenza ukuba zilawuleke ngakumbi xa kufikwa ekuphatheni nasekufakweni. Yeyona fom yexabiso eliphantsi yentsimbi yokuthwala into efumanekayo kwimarike kuba ngokungafaniyo namacwecwe ekrwada amakhulu, olu hlobo lwenziwe ngeendlela ezincinci. Oku kufanelekile ngakumbi kwiiprojekthi ezincinci okanye kumakhitshi aneendlela ezintsonkothileyo okanye iimilo zokubala.
Ukufakelwa ngobulumko, iithayile zegranite zibethelelwe emaphethelweni kwaye zinamalungu afuna ukutywinwa ngokugqibeleleyo. Kuthathelwa ingqalelo njengecala elisezantsi lokusebenzisa iithayile zegranite kukuba kubiza ngexabiso eliphantsi kunendawo yonke yokubamba kunye nokufuna i-grout ehambelana ncam nombala wethayile yakho ukunciphisa ukubonakala kwemisonto. Isilumko sokugcina, iithayile zegranite zifuna ukhathalelo ngakumbi kuba ubumdaka bungena kumalungu kwaye i-grout nayo ifuna ukuthengiswa rhoqo.
Iithayile zegranite eziluhlaza zihlala zibiza i-6 ukuya kwi-15 yeedola kwisiqwenga ngasinye okanye kwi-10 ukuya kwi-40 yeedola kwinyawo nganye Ubungakanani obuqhelekileyo zii-intshi ezili-12 nge-intshi ezili-12 (12 x 12) zethayile zesikwere okanye i-intshi ezingama-31 ubude nge-intshi ezi-18 ububanzi (31 L x 18 W) kwiithayile zoxande ezizi-intshi ezi-0.5 ubukhulu. Oku kungathengwa eshelufini kubathengisi bamatye okanye kwiivenkile zokuphucula ikhaya. Iindleko zokufakelwa zingasebenza zijikeleze i- $ 50- $ 75 ngeenyawo zenyawo nganye.
Iithayile zegranite eziluhlaza ziyafumaneka kwiindidi zeepateni njengoko zinjalo zona iintlobo zegranite eluhlaza kodwa zancitshiswa ngokobungakanani, ke uyilo lobulumko, zisasebenza ngeendlela ezahlukeneyo kwaye ziyaguquguquka. Xa kuziwa kwisitayile, iithayile zegranite eziluhlaza zifaneleke ngakumbi kwiikhitshi zale mihla kunye nezexesha langoku ezilula. Ikwafumaneka ngokugqitywa okanye kugqitywe matte.
Kuboniswe apha ngasentla ngumzekelo wetayile ye-Emerald Green granite ene-intshi ezingama-31 nge-18 intshi ngobukhulu. Njengoko umntu anokuqaphela, inombala oluhlaza ongwevu ngombala nge-beige kunye nokuphola okuphantsi kwegrey. Olu hlobo lwethayile yegranite eluhlaza lilungile njengendawo yokuphamba yekhitshi enekhabhathi enombala omnyama.
Ndwendwela eli phepha ukufumana ezinye izimvo malunga Imiphezulu yeetafile zegranite kubandakanya iintlobo zomphetho kunye nokugqitywa.
iikhabhathi ezimnyama ezibandezelekileyo
udonga oluhlaza olukhanyayo
uhlawula njani umtshato
yintoni ukufumana umyeni wesikhumbuzo